Ciyaartooyda Somalia u matalaysa ciyaaraha Olympikada sanadka 2016-ka oo la tababarayo [Maqal+Sawirro]
Faadumo Cali Nuur oo kamida gudiga fulinta xiriirka kubadda kolayga Soomaaliya ahna madaxa ururka gabdhaha Isboortiga Soomaaliya oo [more]
Mo Farah oo ku guulaystay bilada dahabka ee orodada 5000 Mitir ee ka socda Beijing.
Mo Farah oo ah orodyahan asal ahaan ka soo jeeda dalka Soomaaliya ayaa ku guulaystay bilada dahabka ee orodada 5000 Mitir ee ka socda magaalada Beiji [more]
Orodyahanka Mo Faarax oo ku guuleystay Bilad Dahab ah [Daawo]
Orodyahan loo yaqaano Mo Faarax oo ah nin heysta dhalashada dalka Britishka, balse asal ahaan ka soo jeedda dalka Soomaaliya oo ka qeyb galaya tart [more]
Guul: Kooxda Qardho City oo gaartay finalka koobka Bariga iyo Bartamaha Afrika [Sawirro] Kooxda kubadda Kolayga Qardho City oo Soomaaliya u matalaysa tartanka koobka magaalooyinka Bariga iyo Bartahama Qaaradda Africa ama Inte [more]
Kooxda Qardho City oo Puntland uga qayb gelaysta tartan Bariga iyo Bartamaha Afrika
Cayaartooyda kubadda Kollayga ee matalaya magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa maanta u amba baxaan caasimada Daar-es-salaam [more]
FIFA oo Puntland ku casuntay shirka magaalada Zürich ee Swizerland.
Agaasimaha Wasaarada Dhalinyarada iyo Sportiga Puntland. mudane Axmed Cabdalle Tigaana ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in wasaaradiisu ay cas [more]
Wasaarada Sportiga Puntland oo waxba kama jiraan ku tilmaamtay Doorashadii Xiriirka Kubada.
Shir Jaraa'id oo maanta ay qabteen Bahda sportska Puntland iyo wasaarada Ciyaaraha Puntland ayaa waxa looga soo hor yimid doorashadii Xiriirka Kubada [more]
Gudiga Qaban Qaabada kowda Agoosto oo qabtay Ciyaar ka mida munaasbadaha Xuska 1-Agoosto. [Sawiro]
Ciyaar galabta ka dhacday Mire Awaare Garoowe ayaa soo qaban qaabiyey gudiga qaban qaabada xuska kowda Agoosto oo waday qabasha mun [more]
Xulka Qaranka Germany oo ku guulaystay koobkoodii 4-aad xalay. [Sawiro]
Xulka qaranka Germany ayaa caawa ku guuleystay koobka Adduunka kaddib guul ay ka gaareen xiddigaha xulka qaranka Argentina ee uu hoggaamiyo [more]
Daawo: Tartanka ciyaaraha gobolada Puntland 2014 [more]